သိကောင်းစရာများ - ခရီးသွားသတင်းများ ခရီးသွားသတင်း (စာမျက်နှာ ၂)
ယူအေအီးသည် emirates အုပ်စုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနက်ဒူဘိုင်း ယခုအချိန်၌၎င်းသည်၎င်း၏နာမည်ကြီးမှုအတွက်အလွန်နာမည်ကြီးလာခဲ့သည်။ ဘောင်းဘီတို၊ စကတ်တိုနှင့်ရေကူးဝတ်စုံ (သို့) စကတ်ရှည်၊ လက်ရှည်နှင့်ခေါင်းစည်းပုဝါလား။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံအနည်းငယ်သာရှိပြီး၎င်းတို့အနက်တစ်ခုမှာမြောက်ကိုရီးယားဖြစ်သည်။ မေးခွန်းကငါအဲဒီနေရာကိုသွားကြည့်လို့ရမလား။ ၎င်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်သောနိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ သင်မြောက်ကိုရီးယားသို့သွားနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဟုတ်တယ်! အမြဲစောင့်ရှောက်သည်၊ ဟုတ်သည်၊ နှင့်အခြားကန့်သတ်ချက်များများစွာရှိသော်လည်းသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ၎င်းသည်မမေ့နိုင်သောခရီးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
အမေရိကသည်မြောက်ဘက်၊ အလယ်ဗဟိုနှင့်တောင်ဘက်တွင်နေထိုင်သူများ၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ သင်ခရီးသွားတဲ့အခါ၊ အလုပ်အတွက်၊ လေ့လာဖို့အတွက်သတိပြုရမယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့အချက်အချို့
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကောင်းဆုံးနွေရာသီနေရာတစ်ခုမှာဂရိကျွန်းများဖြစ်သည်။ ဘယ်ပန်းတိုင်ရောက်မလဲ။ မြေထဲပင်လယ်ကိုအလှဆင်ထားတဲ့လှပတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူး။ အာမခံသင်သည်စုံတွဲတစ်တွဲသို့သို့မဟုတ်မိသားစုအနေဖြင့်တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားလျှင်စိတ်မပူပါနဲ့သင့်အတွက်ဂရိကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိသည်။
နိုင်ငံများကလိုအပ် Covid စမ်းသပ်မှု
နိုင်ငံမှလိုအပ်သော Covid စစ်ဆေးမှုများသည်တူညီမှုမရှိခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ သူတို့တစ်ခုချင်းစီသည်မိမိတို့၏စံနှုန်းများနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုချမှတ်ထားသည်။
ဆောင်းတွင်း၌ကားခရီးစဉ် ၇ ခု
ယခုအအေးမိလာသောအခါကားဖြင့်ခရီးသွားလျှင်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မုန်တိုင်းများနှင့် ...
ငါတို့ရှိသမျှသည်ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အချိန်တန်ရင် ...
ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှန်ပြန်ရောက်လာသောအခါသင်ဂျော်ဒန်သို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ခရီးသွား dest ည့်နေရာ၊ အစားအစာ၊ ဗီဇာ၊
အားလပ်ရက်များရောက်လာပြီ။ coronavirus ပြီးနောက်သင်၏ခရီးများကိုသိမ်းဆည်းရန်အချက်အလက်များ
coronavirus ကပ်ရောဂါပြီးနောက်သင်၏အားလပ်ရက်များကိုစီစဉ်ရန်နှင့်သင်၏ခရီးများကိုသိမ်းရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ သင်မည်သို့သိလိုသနည်း
နောက်ဆုံးမိနစ်ခရီးစဉ်ကိုသွားခြင်းသည်မည်သည့် globetrotter အတွက်မဆိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ထွက်ပြေးဖို့ ...
ဗီယက်နမ်ကိုသွားမလား ထို့နောက်သင်၏ခရီးအတွက်ဗီဇာ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤအကြံပြုချက်များကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
Galicia ရှိကျေးလက်အိမ်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်နေထိုင်ရန်အကြံဥာဏ်များ
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းညွှန်မည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များဖြင့်ခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခုကိုသင်မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
geek ဟူသောစကားလုံးသည် neologism နှင့်နေ့စဉ်နှင့်အလွတ်သဘောအသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
မြင်နိုင်ဆုံးအလှပဆုံးသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာမြောက်ဘက်အလင်းရောင်သို့မဟုတ် Aurora borealis ဟုခေါ်သည်။ ဘာပြလဲ
ဘယ်သူခရီးကိုစိတ်ကူးမထားဘူး။ ဒါဟာခရီးစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနေသည် ...
မက္ကစီကိုမှဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းတွင်လိုအပ်ချက်အသစ်များရှိပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့မလုံခြုံတဲ့ခရီးစဉ်အတွက်ဘာတွေလဲဆိုတာသိချင်ပါသလား။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြောပါလိမ့်မယ်
Las Rozas ကျေးရွာ၊ မက်ဒရစ်မြို့အနီးရှိဇိမ်ခံစျေးဝယ်ခြင်း
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည်တစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမှုတ်သွင်းခံသောအချည်းနှီးဖြစ်သောအဆုံးမရှိသောစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ...
ဘယ်အချိန်မှာ Mallorca ကိုသွားပိုကောင်းသလဲ
ဘယ်အချိန်မှာ Mallorca ကိုသွားပိုကောင်းသလဲ အကယ်၍ သင်အကြံပြုသောအချိန်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုမသေချာပါကမမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုဝင်ကြည့်ပါ။
ခရီးစဉ်စီစဉ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင်များစွာသောအရာများရှိသည်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ...
Eiffel Tower သို့လက်မှတ်များ
Eiffel Tower သည်ပဲရစ်မြို့၏ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ရဲ့မြို့တော်ကိုသွားဖို့မတက်နိုင်တော့ဘူး ...
နောက်ဆုံးအားလပ်ရက်မှာမင်းဟာအရမ်းလိုချင်ခဲ့တဲ့သင်ရထိုက်သောအားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ သင်လများအတွက်စီစဉ်ထားသောခရီးသည်သွားလိမ့်မည် ...
ပဲရစ် Pass, မြို့မှခရီးသွား keys ည့်သည်များ
ပါရီသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအလည်အပတ်အများဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ တစ်ပါတ်သည်၎င်း၏ပြတိုက်များသို့လည်ပတ်ခြင်း (သို့) ပါရီရှိဘားတန်းသို့သွားသည့်တစ်ပါတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုသင်ပါရီသို့သွားမည်လား။ ယူရိုအနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့နဲ့ပဲရစ်စ်ကိုဝယ်ဖို့မင်းစဉ်းစားနေလား။ ကောင်းပြီပြီးတော့ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါကသင့်တော်မယ်၊
camperized ဗန်, ခရီးသွားလာဖို့အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး
တနင်္ဂနွေခရီးစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကောင်းမွန်သော camper van ၏အားသာချက်များနှင့်သက်သောင့်သက်သာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုစီစဉ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများစွာရှိသည်။ ဟိုတယ်၊ ခရီးဆောင်အိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊
စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ခရီးသွားရန် ဦး တည်ရာမပါဘဲလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ
အီဂျစ်သည်ခရီးသွားတိုင်း၏ ဦး တည်ရာဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာမင်းဘဝမှာပိရမစ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းတွေဟာရှင်သန်နေတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ အဲဂုတ္တုပြည်လုံးသင်အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွား၍ အပေါင်းအသင်းပြုလျှင်၊ သူတို့၌မကောင်းသောအကြံကိုမကြံနှင့်။
လက်ဆွဲအိတ်တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာသိရှိရန်လိုအပ်သည်။
Sierra de Guadarrama ၏တောင်ဘက်inရိယာတွင်, မက်ဒရစ်အသိုင်းအဝိုင်း၏အနောက်မြောက်နှင့်တည်ရှိပြီး ...
သခင်ယေရှု၏ရုပ်ပွားတော်များသည်အနောက်ကမ္ဘာနှင့်ခရစ်ယာန်ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင်များပြားလာပြီးတောင်တန်းများ၊ တောင်များပေါ်၌ထမြောက်သောအခါသူတို့သည်လူကြိုက်များသောနေရာများဖြစ်လာသည်။ မက္ကစီကိုတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဘာသာရေးခရီးသွားနေရာများအနက်တစ်ခုမှာဂူရာဂျွာတိုမြို့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Cerro del Cubilete နှင့်ခရစ်တော်၏ကြီးမားသောရုပ်တုဖြစ်သည်။
Cala Turqueta, Menorca အတွက်လှပသောထောင့်
နွေရာသီအပန်းဖြေရန်နေရာကောင်းတစ်ခုမှာ Balearic ကျွန်းများဖြစ်ပြီးမြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိမြို့တော် Palma ဖြစ်ပြီးစပိန်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းဒီနွေရာသီမှာသင်ကမ်းခြေကိုပျော်မွေ့လိုပါသလား။ Menorca သို့သွားပြီး Cala Turqueta တွင်တစ်နေကုန်ဖြူဖြူသဲများ၊ ရေပြာများ၊ ထင်းရှူးပင်များ၊ နေများ ...
သငျသညျအဟောင်းနှင့်သာယာလှပသောမြို့ကြီးများနှင့်ဘုရားဖူးများကိုကြိုက်လျှင်, လှပသော Andalusian မြို့ El Rocíoသို့သေချာသွားပါ။
ကော်လိုရာဒို၏ Grand Canyon သည်သင့်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းပုံရသလား။ သင်ကကြေးနီ Canyon ကိုမသိရ! သူတို့ဟာမက္ကဆီကိုမှာရှိပြီးသူတို့ဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်။
သင်၏ခရီးစဉ်အတွက်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုပြုရန်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့် ...
Camino del Norte မှ Santiago de Compostela သို့သွားပါ
Caminos de Santiago တစ်ခုဖြစ်သည့် Camino del Norte ၏အဆင့်များသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးလှပသောရှုခင်းများနှင့်မြို့ပြwithရိယာများနှင့်အတူ Cantabrian ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်ပြေးဆွဲသည်။
အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းခရီးသွား dest ည့်သည်အများအပြားမှာသြစတြေးလျဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်ကလှပတယ်
Japan Rail Pass, Japan သင်၏လက်၌
ဂျပန်ရထားနှင့်သွားရန်လွယ်ကူသည်။ မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်! ရထားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ ကူးတို့၊ ဤကောင်းမွန်သောတိုင်းပြည်သို့သွားရန်အရာအားလုံး။
ကားတစ်စီးခရီးစဉ်ကိုသွားခြင်းသည်လုံးဝပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်စီစဉ်ရန်အရာအချို့ကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုစီစဉ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲထားရှိသောအရာများစွာမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးဆောင်အိတ်၊ ဟိုတယ်၊ လေ့လာရေးခရီးများ ...
'အလုပ်လုပ်သောအားလပ်ရက်' ဗီဇာကားအဘယ်နည်း။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားကြသနည်း။
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာ 'အားလပ်ရက်အလုပ်လုပ်ခြင်း' ဗီဇာဆိုတာဘာလဲ။ ခရီးသွားခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူအားလုံးကိုသိချင်တာကဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာလဲ။
တိုကျိုကိုသွားပြီးဖူဂျီတောင်ကိုကြည့်ချင်ပါသလား။ ထို့နောက်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ထက်မကသော Hakone ဆီသို့ ဦး တည်ပါ။ သစ်တောများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ ကတ္တရာများ၊ ရေပူစမ်းများ၊ တောင်တန်းများနှင့်ဖူဂျီ (Fuji) ။
သင်အာဖရိကကိုကြိုက်လား ထို့နောက်သင်သည်အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့်ယင်း၏အံ့ဖွယ်ရာများဖြစ်သောရှေးဟောင်းသုတေသန၊ သမိုင်း၊ အမျိုးသားဥယျာဉ်များ၊ သဲကန္တာရများ၊
အာဖရိကမှာရှိတဲ့ Safari ကိုသွားဖို့သင်ဘာတွေသိဖို့လိုသလဲ။
အာဖရိကရှိ Safari Safari သို့သွားခြင်းသည်ခရီးသွားများအတွက်မည်သည့်အတွေ့အကြုံမှမမေ့နိုင်စရာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါသိတယ်…
မင်းကိုပွင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာမင်းရဲ့သင်တန်းကိုထားခဲ့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီလမ်းညွှန်ကိုမဖတ်ခင်သင်သိထားသင့်တဲ့အကောင်းဆုံးအချက်အလက်တွေနဲ့ပါ။
လေဆိပ် VIP နားနေခန်းတွေကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
ခရီးသွားတဲ့အခါ၊ အထူးသဖြင့်ငါတို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆက်သွယ်တဲ့လေယာဉ်ကိုစီးရတဲ့အခါ ...
Buenos Aires ရှိအအေးဆုံးအရက်ဆိုင်များ
သင် Buenos Aires သို့သွားသောအခါဘားသို့မသွားပါနှင့်။ Buenos Aires ရှိအအေးဆုံးအရက်ဆိုင်စာရင်းကိုချရေးပါ၊ သူတို့ကိုမမေ့ပါနှင့်!
တစ် ဦး တည်းခရီးသွားရန်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံများ
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်များသောအားဖြင့်လေးစားမှုရှိသော်လည်းတစ်ယောက်တည်းခရီးသွားခြင်းသည်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရမည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Easter Island ကိုသွားရတာစျေးကြီးတယ်လို့မင်းထင်သလား။ ကြောင်းစိတ်ကူးဖယ်ရှားပစ်ပါ။ အီစတာကျွန်း (သို့) Rapa Nui သည်လက်လှမ်းမီသည့်ပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ကျောပိုးအိတ်ကိုထုပ်ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ယနေ့ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများအားလုံးနှင့်အတူခရီးအတွက်သင့်တော်သောနေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေပါ။
လေဆိပ်လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုတွင်အချိန်သက်သာစေရန်လှည့်ကွက် ၈ ခု
သင်ပေကျင်းမြို့ကိုသွားမလား တားမြစ်ထားသောစီးတီး၊ မဟာတံတိုင်းနှင့်မော်စီတုန်း၏သင်္ချိုင်းဂူများကိုမလွဲမရှောင်သာတွေ့နိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်ဝေးလံခေါင်သီသော၊ ဝေးလံသောနေရာများသို့သွားသောနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်သည်ယခုနှစ်၏ဤအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ မြည်းစမ်း ...
Bruges ရှိကော်ဖီဆိုင် ၅ ခန်း
သင် Bruges ကိုသွားသည့်အခါနံနက်စာစားရန်သို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်သောက်ရန်ခေတ္တအနားယူပြီးကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကိတ်မုန့်၊ ချောကလက်၊
Camino de Santiago လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များ
Camino de Santiago ၏ကြီးမားသောအဆင့်များ၌ပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်ရန်အသုံးဝင်သောအချက်အနည်းငယ်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
ခရုဇ်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်အတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအနည်းငယ်ကိုကြိုတင်သိထားရမည်။ သင့်ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံဥာဏ်တချို့ပေးပါတယ်။
ဘန်ကောက်ကိုသွားမလား ထို့နောက်ဘန်ကောက်မှအပျက်အယွင်းများ၊ စျေးများ၊ ဘုရားကျောင်းများနှင့်ကမ်းခြေများသို့လေ့လာရန်အတွက်ရက်အနည်းငယ်ကြိုတင်မှာယူပါ။
နွေရာသီအားလပ်ရက်များမှာများသောအားဖြင့်ကမ်းခြေ၊ နေ၊ ပင်လယ်၊ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရအနည်းဆုံးတစ်ခုသည် ...
ကလေးများနှင့်အတူအားလပ်ရက်ပျော်မွေ့ရန်ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကိုခံစားပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစုတစ်စုအနေဖြင့်သွားမည်ဆိုပါကဤအစီအစဉ်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏နောက်နွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောအက်ပ် ၅ ခု
နည်းပညာအသစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသွားလာရေးလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေပြီးပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည် ...
သင်လေယာဉ်ပျံသန်းဖူးသလားသို့မဟုတ်ပျံသန်းမည်လားသို့မဟုတ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အတူပျံသန်းလိုပါသလား။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သို့ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဗီဇာနံပါတ်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဗီဇာတွင်ရှာရန်လမ်းညွှန်၊ အခြားနိုင်ငံများသို့သွားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း။ ဘယ်လိုရလဲသိလား
ဒီနေ့အများကြီးစျေးသက်သာသောပျံသန်းမှုရဖို့အကြံပေးချက်များဆက်တိုက်တင်ပြသည်။ စုစုပေါင်း ၅ ခုကသင့်ကိုပိုက်ဆံချွေတာရုံသာမကအချိန်ကုန်သက်သာစေမှာပါ။
နွေရာသီရောက်သည်နှင့်အမျှများစွာသောသူတို့သည်နှစ်ရှည်လများစောင့်စားခဲ့ရသောအားလပ်ရက်များကိုစတင်ကြသည်။ အချို့ကဝေးလံသောနေရာများသို့ ဦး တည်သည်။
လန်ဒန်ကနေ5နွေရာသီအပန်းဖြေခရီးထွက်
ဒီနွေရာသီမှာလန်ဒန်ကိုသွားမလား သင်ပျော်မွေ့လိုပါကမြို့မှ Brighton၊ Portmouth, Salisbury, Whitstable သို့သွားနိုင်သည်။
နွေရာသီမှာဘာလင်ကိုသွားမလား ပူပြင်းသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်ဘ ၀ နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုချရေးသည် - ရေကန်များသို့မဟုတ်ရေကန်များ၌ရေကူးခြင်း၊ အိမ်ပြင်တွင်စားခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက်သွားခြင်း ...
ဒီနေ့ရဲ့တနင်္ဂနွေဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ကိုမကြာခဏခရီးသွားဖို့အကြောင်းပြချက် ၅ ချက်၊ မင်းဘယ်လောက်များများလိုအပ်သလဲ။ မင်းဘယ်သွားမလို့လဲ
ဂျပန်ရှိ Ghibli ပြတိုက်သို့သွားရန်လမ်းညွှန်ချက်များ
အကယ်၍ ဂျပန်ကာတွန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင် Hayao Miyazaki ကိုသေချာသိလိမ့်မည်။ တိုကျိုမြို့ရှိ Ghibli ပြတိုက်သို့သွားရန်၊
ကားမောင်းတဲ့အခါသင်မလုပ်သင့်တဲ့အရာ (၈) ခု
သင်သည် Seville သို့လမ်းလျှောက်လျှင်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေရန်မမေ့ပါနှင့်။ လမ်းလျှောက်အကွာအဝေးအတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မြို့များစွာရှိသည်! Córdoba, Cadiz, Jerez de la Frontera ...
နွေရာသီရောက်တော့မယ်။ ပြင်သစ်တောင်ဘက်ကိုမင်းစဉ်းစားခဲ့သလား။ Languedoc သည်ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းနှင့်ထူးခြားသောကမ်းခြေများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ နွေရာသီဖြစ်လိမ့်မည်
San Francisco မှာလုပ်ဖို့အရာ
San Francisco ကိုသိရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့! Golden Gate ကိုဖြတ်ကူးခြင်း၊ Chinatown နှင့် City Hall သို့သွားခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းများကိုလမ်းရိပ်များဖြင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းကစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါ။
သင် Sidney ကိုသွားနေသလား ဤတွင်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောအရာများစာရင်းဖြစ်သည်။ တံတား၊ ကယက်လှေသို့မဟုတ်ကူးတို့နှင့်တောင်တက်ခြင်း။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင်!
El Tibet ကိုကြိုက်လား? ထို့ကြောင့်သင်၏ခရီးကိုကောင်းစွာစီစဉ်။ ကမ္ဘာ၏ခေါင်မိုးသို့သွားရန်လိုအပ်သောဗီဇာနှင့်အထူးခွင့်ပြုချက်များအကြောင်းအားလုံးသိပါ။
မတူညီသောနေရာ (၃) ခုအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ (II)
ဒီနေ့ဆောင်းပါးသည်မနေ့ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိန္ဒိယ၊ အာရေဗျနှင့်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတို့ကိုကွဲပြားသောနေရာ (၃) အတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်ကျန်းမာရေးအကြံဥာဏ်များဖြင့်ပြန်လာပါမည်။
ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုသည်မှာမူလနေရာမှအခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည့်လူ ဦး ရေကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်လူသားပြောင်းရွှေ့မှုမျိုးရှိသနည်း။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ခရီးသွားရာတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကိစ္စရပ်များအတွက်သွားနေပြီးနေရာ ၃ ခုအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်ကျန်းမာရေးအကြံဥာဏ်များကိုသင့်ထံယူဆောင်လာမည်။
ဒီ5ကိုသွားလာရန် 2017 Cruises နှင့်အချို့သောအကြံပြုချက်များ
အပျော်စီးသင်္ဘောသည်အခြားမည်သည့်ကဲ့သို့သောအားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ အလွန်အပန်းဖြေကမ်းလှမ်းမှုနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ ...
အင်္ဂလိပ်နွေရာသီအားလပ်ရက်လိုချင်ပါသလား ထို့နောက် Devon သို့: ရဲတိုက်များ၊ ချောက်ကမ်းပါးများ၊ ကမ်းခြေများ၊ အလယ်ခေတ်မြို့များ၊ ဘီယာများသို့လည်ပတ်ပါ။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ Interrail သည်လူငယ်များအတွက်အခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့်သိကျွမ်းလာပြီးသူတို့၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာစပိန်အကြောင်းနှင့် ၄ င်း၏ထူးဆန်းသောအရာများအကြောင်းသင်အနည်းငယ်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံလာလျှင်သင်အံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကိုခွင့်မပြုတဲ့နေရာ ၅ နေရာကိုတင်ပြထားပါတယ်။ သင်စိတ် ၀ င်စားလျှင်၎င်းတို့ဘာကိုသိသည်ကိုဆက်ဖတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားခြင်းအတွက်အသုံး ၀ င်သောအကြံဥာဏ်များ၊ လူများများလုပ်သည့်အရာများနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံရှိစေနိုင်သည်။
သင်မသိသောလှပသောပြင်သစ်ရဲတိုက် ၃ ခု
Loire ၏ခရီးသွား most ည့်အများဆုံးရဲတိုက်များနှင့်မနေပါနှင့်။ လှပသောသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအခြားသူများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ် - လူသိများနှင့်အံ့သြဖွယ်အရာသုံးခုရှိပါတယ်။
အီရန်ဟာမှော်အရိပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာစွန့်စားခန်းတွေကိုနှစ်သက်ပြီးအလွန်ကွဲပြားတဲ့နေရာတွေမှာခရီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်သွားရှာပါ။ ဤနေရာတွင်သင်လုပ်ရန်လက်တွေ့ကျသောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ရထား၊ လေယာဉ်၊ ဟိုတယ်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူနေခြင်းစသည်တို့သည်ဤစျေးပေါသောရွေးချယ်စရာများနှင့် ပိုမို၍ စီးပွားရေးအရမည်သို့ခရီးသွားရမည်ကိုပြောပြသည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်အတူခရီးသွားခြင်းသည်ယနေ့လူများစွာလုပ်သောအရာဖြစ်သည်၊ မိသားစုဝင်နောက်တစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိရမည်။
Camino de Santiago အကြောင်းဘယ်သူမှမပြောပြဘူး
Boracay, ဖိလစ်ပိုင်အတွက်အကောင်းဆုံး ဦး တည်ရာကို
ဖိလစ်ပိုင်မှာအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများကိုလိုချင်ပါသလား ထိုအခါ Boracay သွား!
သင်၏ခရီးများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အသုံးဝင်သောအက်ပ် ၅ ခု
အကယ်၍ သင်သည်သမိုင်း၊ သမိုင်းဟောင်းကိုချစ်မြတ်နိုးပါက၊ အချို့သောနေရာများတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကိုသိရှိရန်ဤဆောင်းပါးသည် ...
ခရီးစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်အမြဲတမ်း ၀ မ်းမြောက်စရာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Baltic Sea Cruises 2016
သင်ခရီးသွားချင်ပါသလား။ အရှေ့ဥရောပနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှများများလိုချင်သလား။ ငါတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကိုဖွင့်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖြည့်ပါ။
ဤရွေ့ကားခရီးသွားသည့်အခါသင့်အားဖြစ်ပျက်သောအရာအချို့မှာ - ၎င်းတို့အားလုံးနှင့်အတူတူသည်ဟုခံစားရသလောသို့မဟုတ်အချို့နှင့်သာဖြစ်မည်ဟုသင်ခံစားရသလော။
ဂျပန်ခရီးသွားလမ်းညွှန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအစာ၊ စျေးနှုန်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်း
ဂျပန်ကိုကြိုက်ပေမယ့်အရမ်းစျေးကြီးတယ်လို့ထင်လား မဟုတ်ပါ၊ အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင့်ကိုစောင့်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ပျော်မွေ့ရန်ဤအကြံပြုချက်များနှင့်အချက်အလက်များကိုချရေးပါ။
ပဲရစ်ကိုလာတဲ့ခရီးသွားတွေအတွက်ခရီးသွား discount ည့်လျှော့စျေးကဒ်ရှိတယ်။ မင်းဘာဖြစ်မယ်။ ထွက်ရှာ၊ ငွေစုပြီးပျော်မွေ့ပါ။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်စီးရန်အကောင်းဆုံးအလံခြောက်ခုကိုရှာဖွေပါ။ သူတို့၏အမြင့်နှင့်အမြန်နှုန်းကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြသောအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် roller coasters ။
အီကွေဒေါရဲ့အကောင်းဆုံး: Pailón del Diablo
Pailón del Diablo သည်Baños de Agua Santa မြို့အနီးရှိအီကွေဒေါနိုင်ငံ Andes တွင်တည်ရှိသော Pastaza မြစ်ပေါ်တွင်ရေတံခွန်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်အခမဲ့ပြတိုက်များတည်ရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ အိုကေကောင်းလိုက်တာ။ နောက်ဆုံးတော့…
အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်သို့ခရီးထွက်လျှင်၊ မမေ့နိုင်စရာကောင်းသောဤအတွေ့အကြုံငါးခုကိုသင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်
ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများမှအခြားခရီးစဉ်များရှာဖွေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သွားလိုသည့်နေရာတွင်ကူညီရန်ရှာဖွေရန်နေရာများကိုရှာဖွေပါ။
ခရီးသွားရာတွင်သင့်အားကူညီမည့်ပူးပေါင်းစားသုံးမှုပလက်ဖောင်း ၅ ခု
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့အကျပ်အတည်းထဲရောက်နေတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ခရီးသွားခြင်းရဲ့ "ဇိမ်ခံကား" ကိုမတတ်နိုင်တဲ့လူ ဦး ရေနည်းပါးလာတယ်။
ဒီ 2016 ခုနှစ် Iguazu ရေတံခွန်သို့သွားရောက်ရန်အတွက်သိကောင်းစရာများ
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Iguazu Falls သို့သွားရောက်ရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုရေးချပါ
အိုက်စလန်သို့၊ လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လှေဖြင့်မည်သို့သွားရမည်ဆိုလျှင်လက်တွေ့အချက်အလက်
အိမ်ထောင်စု ၁၀ စုတွင် ၆ ခုသည်စပိန်တွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိသည်။ စုစုပေါင်းတိရစ္ဆာန်ပေါင်း ၁၆ သန်းကျော်သည်
လေယာဉ်နဲ့ခရီးသွားမလား လေယာဉ်ပေါ်မှာစားစရာတွေယူလာလို့ရမလား သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်ကိုသင်မည်သည့်အရာနှင့်သယ်ဆောင်နိုင်ပြီးမည်သည့်အရာကနှိုးစက်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်းရှာဖွေပါ။
Valentine's Day ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားရန်မက်ဒရစ်ကိုကျော်ပြီး
Valentine's Day တွင်မက်ဒရစ်ကိုကျော်ပြီးပူပြင်းသောလေပူဖောင်းဖြင့်ပျံသန်းကာရှုခင်းများကိုခံစားပါ
ပိုမိုခရီးသွားလာ, 2016 အတွက်ရည်ရွယ်ချက်
သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်စာရင်းတွင်အောက်ပါကိုရေးပါ -“ ပိုမိုခရီးသွားရန်၊ ၂၀၁၆ အတွက်ရည်ရွယ်ချက်။ ” ဤနည်းဖြင့်သာသင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကြီးထွားလာပြီးအတွေ့အကြုံများကိုရရှိလိမ့်မည်။
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းကိုပြုစုခဲ့သည်။ သင်မကြာမီခရီးတစ်ခုသွားမည်ဆိုပါကဤနေရာတွင်ရှာဖွေပါ။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးသောနေရာများသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားနေသောခရီးသည်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားရှိ Woodside သို့ရောက်ရှိသည်။
ယခုတကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလာရောက်လည်ပတ်သူအများဆုံးကျေးလက်ဒေသခရီးသွားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ပထမနေရာမှာတော့ ...
ဒီတစ်ခါတော့ခရီးသွားမဂ္ဂဇင်းတွေကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာသိတော့မယ်။ National Geographic Traveler, မဂ္ဂဇင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့။
Keeway Superlight 200: မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးတရုတ် Chopper ဆိုင်ကယ်
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးသည် adrenaline ကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်အံ့မခန်းဖွယ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုတကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောမသို့သွားရန်ထူးချွန်သောလျှောက်လွှာများကိုမိတ်ဆက်မည်။ ကေတီပါလာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုစကြရအောင် ...
တိုကျိုမှာ 'ရာကီတိုရီ၏လမ်း' ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်ရိုးရာတိုက်နယ်မှထွက်ချင်သောခရီးသွားများအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်စင်တာမှဝေး။ သွားသောထောင့်များကိုရှာဖွေပါ။
နွေရာသီသည်အလွန်နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်၍ ပူပြင်းသည့်အပူရှိန်ကြောင့်သင့်အား tan နှင့်အနားယူရန်ကမ်းခြေသို့သွားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Paragliding - ကျွန်ုပ်တို့ကိုပျံသန်းရန်ခွင့်ပြုသည့် Adventure Sport
Hvar ကျွန်း, ခရိုအေးရှား၏ Ibiza ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ - ကော်ဖီဆိုင်များ၌ခရီးသွားများကိုဆေးခြောက်များရောင်းချခြင်းကိုတားမြစ်သည်
မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသည်းခံနိုင်မှုပေါ်လစီသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှခရီးသွား to ည့်သည်များအားကမ်းလှမ်းသည့်ဆွဲဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအခါသမယတွင်ခရီးသွားများအတွက်အသုံးဝင်သောအွန်လိုင်းကိရိယာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသွားပါမည်။ Tripit သို့မသွားရန်အကြံပြုခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့။
Royal Caribbean - ဆိုရင် single Cruises အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခု
သင်တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားပြီးပြန်လာချင်ပါသလား? အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိတွင်မိတ်ဖက်မရှိဘဲကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေနေပါကသင်သိရန်စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည် ...
Lima ၏ရာသီဥတု - ပီရူးနိုင်ငံ၏မြို့တော်ရာသီဥတု
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ပီရူးကိုသွားမယ်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာတစ်ခု ...
Comoros ကျွန်းများ - အထွေထွေအချက်အလက်များ၊ အကောက်ခွန်နှင့်သိချင်စိတ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်များကိုထုပ်ပိုးပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှပဆုံးနေရာတစ်ခုသို့သွားရန်စီစဉ်ကြပါစို့။ Us …
တစ် ဦး Cruise အပေါ်အလုပ်လုပ်ဘို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား
သငျသညျအပျော်စီးခရီးသွားလာချစ်သောသူနှင့်သင်ကနေတဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုသွားလိုလျှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ...
ဂျီနီဗာရေကန် - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကျေးလက်ဒေသနှင့်သဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကမ်ဘာပျေါတှငျ Salsa ပွဲတော်များ
Salsa သည်လက်တင်အမေရိက၊ အထူးသဖြင့်ကာရစ်ဘီယံ၌အလွန်အကများသောဂီတအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အနိုင်ရခဲ့သောဒီစေးကပ်မှုသည် ...
အီတလီလူမျိုးတွေရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထား၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ သူတို့ဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ ...
လီမာမြို့သည်ဗဟိုအဝေးပြေးလမ်းနှင့်ပန် - အမေရိကန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှတဆင့်နိုင်ငံ၏ကျန်ဒေသများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကတည်းက…
Agua de Cacao, Acapulco သောက်စရာ
မက္ကစီကိုကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်၎င်း၏ကမ်းခြေများနှင့်ညဘက်များသိကြသောကြောင့်လူသိများသည်။ ပုံမှန်အချိုရည်တစ်ခုမှာ ...
ဂျမေကာတွင်လှပသောကမ်းခြေများအပြင်အခြားသဘာဝရှုခင်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့အနက်:
Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani